देश हराएका मान्छेहरूको खोजिमा
समकालीन पुस्ताका निकै सक्रिय रगंकर्मी हुन् – पुरु लम्साल । गजलकार र कविका साथै उनको सक्रियता क्यानभाषमा अनेकौं रंग पोत्नमा पनि देखिन्छ । भूकम्पले घर ढले पनि आफूजस्तै हजारौं नेपालीको मन नढलोस् भन्ने इच्छा बोकेर राहत बाँड्न दौडिन्छन् कहिले उनी ।
कहिले वादी समुदायमाथि नजर दौडाउँछन् र बनाउँछन् उनै समुदायमाथिको वृत्तचित्र । यो जिन्दगी खै के जिन्दगी ? का नायक (हरिभक्त कटुवाल) माथि पछिल्लो समय वृत्तचित्र निर्माण गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पुरु खुरुखुरु लागिरहेछन् – ‘देश हराएका मान्छेहरूको खोजिमा ।’
गोजीबाट पाँच रुपैयाँ हराउँदा त मानिसलाई कस्तो चिन्ता हुन्छ तर यहाँ त सिंगो देश हराएको छ । चिन्ताको कुरा कस्ले गर्ने ?
‘ठूलीका सपना’ले व्यूँझाएको पुरुको रंग चेतना अर्को ओरालोबाट विस्तारै ऊँभो चढ्दै आएको छ – ‘देश हराएका मान्छेहरूमा’ । यहाँ के हराएको छैन ? व्यक्ति हराएको छ । गाउँ हराएको छ । देश हराएको छ र हराएको छ यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको सम्पूर्ण अस्तित्व ।
कयन मानिसहरू तीन ‘प’ (पैसा, पद र प्रतिष्ठा) को आडमा रातोलाई कालो-कालोलाई सेतो गरिरहेका छन् त कोही बर्षौंसम्म नेपाली भूमिमा लडिबुडि गर्दा पनि नेपाली हुनुको पहिचान पाउन सकेका छैनन् । कतिलाई राज्यले बेपत्ता बनायो । कतिलाई विद्रोहले । यस्तै कथा बोकेको छ -प्रस्तुत नाट्य कृतिले । गोजीबाट पाँच रुपैयाँ हराउँदा त मानिसलाई कस्तो चिन्ता हुन्छ तर यहाँ त सिंगो देश हराएको छ । चिन्ताको कुरा कस्ले गर्ने ? अब पालो पुरुको चिन्तामा साथ दिने र आफ्नो अस्तित्व खोज्ने ।